:: My Little World ::: ခရီးသွားချိန် : ပဲပြုတ် နှင့်ထမင်းကြော်
Posted by Nay Nay Naing at 5/13/2010 12:12:00 AM
မခင်ဦးမေက အတော်ဆိုးတယ်...:P သူက အဲလိုမဆိုးဘူးရယ်... တို့ သိနေတယ်.. :D
မပြောခင်ကြိုကာတဲ့သဘော တင်လိုက်ရတာပါ။ ထမင်းကြော်က ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်၊ ပဲပြုတ်နံပြား ဒီမှာ စားရဖို့ မလွယ်ဘူးလေ။
ဘယ်လိုတွေ၊ ဘာတွေများ သိနေတာလဲလို့စိတ်ဝင်စားသွားမိပါတယ်။
Thursday, May 13, 2010 10:41:00 AM
buy steam pea from pennisula. mix with oil & salt, put into small container, bring it to Indian stall which sell naan. Order naan & eat with ur steam pea.